Fitaovana Nomerika, Fampandraisana Anjara ireo Tanora Ao Tanzania sy Meksika Amin’ny Demaokrasia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Novambra 2014 2:03 GMT
Tanora mpandray anjara tamin'ny Forum manerantany momba ny Demaokrasia – sary avy amin'i Suzanne Lehn
“Amin'ny fandraisana anjara ka hatramin'ny Fitarihana: afaka mamelombelona indray ny demaokrasia ve ny tanora” ? no lohahevitra tamin'ny Forum manerantany momba ny demaokrasia andiany fahatelo izay notontosaina tao Strasbourg tamin'ny 3 hatramin'ny 5 novambra 2014. Manambara ireo sakana goavana manakana ny tanora tsy handray anjara mavitrika amin'ny fizotry ny demaokratika ilay lohahevitra natao amin'ny endrika fanontaniana. Voatery mitady fomba ahafahan'izy ireo mampivelatra ny kolontsain'ny fandraisana andraikitra ao anatin'ny fandraisana anjara mivaingana amin'ny fiainana ara-politika sy ara-tsosialy ireo tanora mahatsiaro ho tsy voasolo-tenan'ireo olom-boafidy. Toy izao ny votoaty hita ao amin'ny Lab 6 “Mpiambina ny demaokrasia” : ho afaka hametraka fifandraisana misy fifampitokisana eo amin'ireo mpanapa-kevitra sy ireo tanora ve ry zareo, ary hanao izay mety hahatompon'andraikitra kokoa ireo andrim-panjakana ary hihaino ny rehetra, ka anisan'izany ny tanora? Namaritra ny hetsiky ny vaomieran'ny tanoran'ny Mwanza, izay ahafahan'ireo ankizy sy tanora maneho hevitra an-kalalahana i Shaban Ramadhani, mpanorina sy tale mpanatanteraka nyMwanza Youth and Children Network (MYCN: Tambajotran'ny Ankizy sy ny Tanora Mwanza MYCN) ao Tanzania.
Fangon'ny MYCN, Tanzania
Nanantitra ireo ezak'ity fikambanana misahana ny mahaolona any ifotony ity i Sarah Huxley, mpandrindra ny Zon'ny Ankizy sy tanora ao amin'ny Action Aid International mba hanentanana ny tanora hiady amin'ny tsy rariny ara-tsosialy no sady manampy azy ireo hitady fomba ahafahan'izy ireo hiatrika ireo fanamby goavana. Ankoatra izany, mikasa hatrany ny fikambanana hampiditra ireo tanora ho ao anatin'ny fitantanany, sy hanamafy ny fahefan'izy ireo ary hitarika azy ireo hametraka tetikasa politika.
Ahoana no handrisihana ny tanora handray anjara amin'ny fizotry ny demaokratika ao anatin'ny fitondrana jadona manakana azy ireo tsy haneho hevitra, ka avy amin'izany no hahafantarana ny demaokrasia amin'ny endrika teorika sy hevitra ao anatin'ny manjavozavo indrindra? Mahatonga ireo tanora hivoaka eny an-dalambe izany fanavahana izany hihantsiany ireo rafitra ary hitakiany ny zony hanana fahalalahana sy demaokrasia. Nandinika ny atao hoe fihetsiketsehana ara-tsosialy ny Lab 18, fa izany no mety ho maoteran'ny fanovana rafitra araka ny filazan'i César Alain Ruiz Galicia, avy ao amin'ny hetsika #Yosoy132 : tanora meksikana mpikatroka sy mpanao gazety, nampiseho tamim-pirehetam-po izy fa sakana goavana amin'ny fametrahana ny tena demaokrasia ny fitaovam-pifandraisana nentim-paharazana ao Meksika. Izany indrindra no mahatonga azy hitaky fisantaran'andraikitra vaovao momba ny kolontsaina nomerika azo antoka kokoa, marina kokoa sy tsy mitanila ary malalaka kokoa. Nampiseho ny adihevitra fa mety hiantraika amin'ireo rafitra demaokratika manerantany ireo hetsika ara-tsosialy saingy mbola betsaka no tokony atao. Saintsaino manokana ohatra ireo revolisiona manerana ny tontolo Arabo tahaka ny tao Tonizia sy Ejypta, izay nahavitra naneho tamin'izao tontolo izao fa afaka mandroaka ireo mpanao didy jadona eo amin'ny fitondrana ireo fihetsiketsehana ara-tsosialy ary manolo ny fitondrana jadona amin'ny rafitra mety ho demaokratika kokoa na tsia, saingy mbola lavitra ny dia!
Noraketina ireo adihevitra tao amin'ny Labs ary azo jerena ao amin'ny tranonkalan'ny Vaomieran'i Eoropa ireo lahatsary.